Home Somali News Iran iyo Mareykanka oo wada hadlaya
Xoghayaha Arrimaha dibadda ee Mareykanka, John Kerry ayaa wada hadalo la bilaabay dhigiisa wadanka Iiraan, Javad Zaarif, iyadoo ay socdaan wadahadalada lagu xaqiisanayo in heshiis laga gaaro barnaamijka Nukliyeerka ee Iran.
Wakiilada ka qayb galaya Wada xaajoodka ayaa aad isugu dayayaa sidii ay ku dhameystiri lahaayeen qaab heshiis ah,kadib markii waqtigii kama dambeys ahaa ee la qabtay wada hadalada in heshiis lagaga gaaro uu dhamaaday.
Waxaa jira fariimo iskhilaafsan oo ka soo baxaya ka qeybgalayaasha shirka. Qaar ayaa tilaamaya in laga yaabo in goor dhow heshiis la gaaro.Halka qaar kalena ay sheegayaa in faraq weyn uu wali dhinacyda u dhaxeeyo.
Iran ayaa sheegtay haddii aanan la soo saarin bayaan cad oo cunaqabateynta ka dhanka ah Iran laga qaadayo in uusan heshiis dhici doonin.
Wararkii Ugu Danbeeyey Gabadhii Garoowe Ku Guursatay Ninka Dilaaga Ah + Ciidamo Maraykan Ah Oo Puntland Gaadhay Iyo Xaaladii U Danbaysay + Daawo Muuqaal
Somaliland: Madaxweyne Ku-xigeenkii Hore Ee Somaliland Oo Ka Hadlay Sida Loo Maarayn Karo Xeerka Saami Qaybsiga Golaha Wakiillada.